UHalva, ozozuza izinzuzo zakhe kanye nokulimala kule ngqungquthela, akuyona nje into yokudla yaseMpumalanga, eyaziwayo emhlabeni jikelele. Izwe lakubo yiPheresiya (i-Iran yamanje). Iqiniso liwukuthi emazweni amaningi ase-Asia lenziwa ngesandla kuphela. Kukholelwa ukuthi kuphela i-halva ingaba mnandi ngempela futhi ewusizo. ERussia, lo mkhiqizo wafika kahle kakhulu (endaweni ethile ekuqaleni kwekhulu lama-20), kodwa ukuthandwa kwazuza ngokushesha kakhulu. Namuhla ezweni lethu halva akumangalisi. I-Halva, izinzuzo kanye nezimo ezimbi ezizochazwa lapha, zenziwe ngezinhlamvu ze-sunflower, amantongomane, imbewu ye-sesame nokunye okuningi. Ngalunye uhlobo lwalo lunezici ezithile.
I-Halva: inzuzo nokulimala
Lo mkhiqizo ufanelwe ukuchaza ngokuningiliziwe zonke izindawo zayo. Ngaphambi kokukhuluma ngokuthi i-halva ewusizo kanjani uhlobo oluthile, kufanele ukhulume ngezinzuzo zayo ngokujwayelekile.
Yiqiniso, kungasiza abantu abanezifo eziningi, kodwa inzuzo ye-halva ukuthi iyinambitha kakhulu futhi ingaletha injabulo enkulu kumntwana nakumdala. Ngokuvamile, noma iyiphi i-halva, njengomthetho, inezici ezilandelayo eziwusizo :
- iqukethe amavithamini amaningi umuntu adinga ukuba khona okuvamile;
- equkethe amaprotheni akhe namafutha afakwa ngokuphelele umzimba;
- ukusetshenziswa kwayo njalo ngokuhambisana nemidlalo kubangela ukuthi umzimba ugcwele imisipha;
- Ukusetshenziswa kakhudlwana kwalo mkhiqizo kunciphisa kakhulu ingozi yomdlavuza.
Uma sicabangela zonke izinhlobo zayo ezihlukene ngokuhlukile, kufanele kuthiwa:
- i-peanut halva iqukethe inani eliphakeme kakhulu le-folic acid, elithinta kahle izinto zethu eziphilayo, okufaka ekuvuseleleni amaseli, ngaleyo ndlela ikhulise ubusha bethu. Amavithamini, afaka phakathi kwe-peanut halva, unganikeli ama-radicals mahhala ukubhubhisa umzimba wethu. Kunezizathu zokukholelwa ukuthi lezi zinhlobonhlobo zomkhiqizo omuhle ophazamisayo ziphazamisa izifo zenhliziyo ezehlukene, futhi zilwa nezidumbu;
- i-pistachio halva ayidlangalaleni, futhi akuyona yonke into eyayizama. Kuyinto elihlwabusayo kakhulu futhi elimnandi kakhulu. Kumele futhi uqaphele ukuthi lo mkhiqizo unezakhiwo eziwusizo zamantongomane e-pistachio ;
- i-sunflower halva yiyona ehlukahlukene kunazo zonke zomkhiqizo ochazwe (kunoma yikuphi, ezweni lethu). Kukholelwa ukuthi kuvamile isimiso sezinzwa, futhi sithinta kahle umsebenzi wenhliziyo. Futhi, ososayensi bakwazi ukufakazela ukuthi ukuqiniswa kwe-acidity yejuji yesisu;
- Sesame (tahini) i-halva yikudla okumnandi, okuyinto ehlonishwa kakhulu futhi ethandwa yizigubhu. Kuyamangalisa kakhulu kumaminerali, amavithamini nezinye izinto eziwusizo kubantu. Lo mkhiqizo uthinta ngokuyisimangaliso isimiso sokuphefumula, uvikela amathumbu umdlavuza, futhi uqinisa uhlelo lwesishukela.
Sikhulume ngezinzuzo, ngakho sekuyisikhathi sokukhuluma ngomonakalo walokhu ubumnandi. Okokuqala, kubalulekile ukuqaphela iqiniso lokuthi i-halva ngumkhiqizo othakazelisayo. Yiqiniso, ukuyisebenzisa ngokujwayelekile kuyithinta kakhulu isimo samazinyo ethu. Ngamanye amazwi, kunesidingo salokho ngokulinganisa, kodwa izingane kufanele zinikezwe ngezikhathi ezikhethekile kuphela.
Ngokubi kuyithinta impilo yalabo bantu abagulayo ngesilonda esiswini noma isilonda se-duodenal. I-Halva ingabangela ukugula nokuvuvukala kwamagundane amancane. Kunesizathu sokukholelwa ukuthi imikhiqizo lapho i-halva ikhiqizwa ithatha izinto ezilimazayo emvelweni. Lokhu kusho ukuthi akufanele uthenge i-halva kunoma ubani omunye, futhi uma ukhetha ukusindisa.
I-Halva, izinzuzo nezingozi eziye zacatshangelwa, ngeke zilahlekelwe ukuthandwa kwayo, njengoba abantu abaningi beyithanda ngayo yonke inhliziyo yabo. Yiqiniso, kungalimaza, kepha akukho okubi okuzokwenzeka uma usebenzisa kahle.
Kanjani ukwenza ikhekhe "Potato" ekhaya?
"Diflucan" (ikhandlela): izinkomba, yokusetshenziswa, analogs, ukubuyekezwa